आर्मी जागिरे श्रीमानले घर न घाटको बनाए पछि बिचरा रुकु फेरी गम्भीर पिडामा! थप अपडेट (मार्मिक भिडियो सहित) - Complete Nepali News Portal
आर्मी जागिरे श्रीमानले घर न घाटको बनाए पछि बिचरा रुकु फेरी गम्भीर पिडामा! थप अपडेट (मार्मिक भिडियो सहित)
दुख: सुख प्रकितीको नियमनै हो तर पनि यो संसारमा दुख; कसलाई पर्दैन र आज हामी संग यस्ती चेली जो एउटा हात र खुट्टाको अशक्त हुनुन्छ रुकु देवी भुजेल जो पछिल्लो लामो समय देखी नै दुखको पोखरिमा डुबेकी छन। स्कटनेपाल संगको अन्तरबार्तामा उनको जीवन कथा सुन्दा तपाई लाइ आज यस्तो लाग्ने छ के उनलाई भाग्यले पक्कै पनि ठगेकै हो त। उनी संग एउटा कलिलो बालक छ जसको भविष्य लाइ लिएर धेरैनै चिन्तित छिन । हुन् त यो बिषय बस्तु पछिल्लो समय धेरौ युटुब लगायत सामाजिक संजालमा देखा परेको हो तर फेरि पिडित रुकु भुजेल अहिले आफै अस्वस्थ भएको र सानो बालकको समस्याहरु लिएर फेरि एक पटक मिडिया आएकी छन ।